Madaxweyne Muuse Biixi Oo Ka Hadlay Gardarrada Soomaaliya Ee Ka Dhanka Ah Qaddiyadda Somaliland Abaaraha iyo Arrimo Kale | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweyne Muuse Biixi Oo Ka Hadlay Gardarrada Soomaaliya Ee Ka Dhanka Ah Qaddiyadda Somaliland Abaaraha iyo Arrimo Kale
Hargeysa (SDWO): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa si mug leh uga hadlay arrimo door ah oo salka ku haya gardarrada joogtada ah ee ay Soomaaliya ku hayso qarannimada iyo madax-bannaannida Somaliland iyo xaaladda abaareed ee mar kale ka curatay gobollo kamid ah dalka.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta jir shiraa’id ku qabtay xarunta qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa hadalkiisa si gaar ah diiradda ugu saaray dacwado ka dhan ah maal-gashiga marsada Berbera iyo heshiisyada ay Jamhuuriyadda Somaliland la gashay shirkadda DP World oo ay Soomaaliya u gudbisay Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa.
Waxaanu tallaabooyinkaas ku tilmaamay qaar ka dhan ah himilada qaranka, kana hor imanaya go’aankii shacabka reer Somaliland hore ugu gaadheen inay dawlad madax bannaan ku noqdaan.
Ugu horrayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa uu shaaca ka qaaday inay xukuumad ahaan qaadeen wixii tallaabooyin ahaa ee ay kaga hor tegayeen dacwadaha ay Soomaaliya gudbisay, iyadoo intii shirka jaraa’id ee madaxweynuhu uu socday weriyeyaashu ay su’aalo badan waydiiyeen.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa uu ku dheeraaday taariikhda ma guuraanka ah ee isla soo mareen dalalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo sida aanay Somaliland marnaba qayb uga ahayn dawladihii loo dhoob dhoobay Soomaaliya.
Halkan Ka Daawo Shirka Jaraa’id Ee Madaxweynaha: